Dagaal Ka Dhacay Magaalada Beledweyne Ee Gobalka Hiiraan. – Bogga Calamada.com
Dagaal Ka Dhacay Magaalada Beledweyne Ee Gobalka Hiiraan.
January 31, 2018 7:23 am Views: 170
Wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in weerar hubeysan markale lagu qaaday fariisin maleeshiyaatka Murtadiinta ay ka sameysteen qeybo ka mid ah magaalada Beledweyne ee xarunta gobalkaasi.
Dagaal xooggan ayaa xalay saqdii dhexe galbeedka magaalada Beled Weyne ku dhaxmaray ciidamo katirsan Shabaabul Mujaahidiin iyo maleeshiyaad katirsan Dowladda Ridada oo saldhig melleteri ka sameystay xaafadda Doon Subagle.
Dagaalkan waxa uu sigaar ah kaga dhacay Galbeedka magaalada waxaana la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan kaasi oo dhawaaqiisa si aad ah looga maqlayay xaafadaha kala duwan ee magaaladaasi,waxeyna warar hoose sheegayaan in maleeshiyaatka dowlada khasaara lagu gaarsiiyay dagaalkaasi.
Dagaalkan ka dhacay magaalada Beledweyne waxa uu imaanayaa xilli Labo maalin ka hor ciidamada Shabaabul Mujaahidiin weerar ay ka fuliyeen duleedka degmada Jalalaqsi ee gobalka Hiiraan ay ku dhaawaceen Shan askari oo ka tirsan maleeshiyaatka Murtadiinta Hirshabelle.